एन्ड्रोइड म्यानुअल, शुरुआत र पहिलो चरणहरूको लागि आधारभूत गाइड Androidsis
एन्ड्रोइड म्यानुअल, शुरुआतीहरूको लागि आधारभूत मार्गनिर्देशन
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | ट्यूटोरियलहरू
यदि तपाईंले एकको लागि खोजी गर्नुभयो एन्ड्रोइड म्यानुअल र यो पोस्ट भेटियो, सबै भन्दा पहिले, स्वागत छ। तपाईं यहाँसम्म दुईवटा सम्भावित विकल्पहरूको लागि आउनुभएको छ। या त तपाईं एक "weirdos" मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले एक स्मार्टफोन भएको प्रतिरोध गर्नुभयो र तपाईंले अन्तत: आधुनिकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुभयो, वा तपाईं अर्को अपरेटिंग प्रणालीबाट आउनुभयो र एन्ड्रोइड तिर कदम चाल्न चाहानुहुन्छ, मोबाइल अपरेटिंग सिस्टम बराबर उत्कृष्टता। हुनसक्छ तपाईं अझै खोजी चरणमा हुनुहुन्छ र सबै चीजहरू कसरी काम गर्दछ जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ। अधिक र अधिक कदम चाल्दै छन्, अन्य चीजहरूको बीचमा कि तिनीहरू बाँकीबाट विच्छेदन भएको महसुस गर्छन्।
यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले अन्ततः "हुप मार्फत जानुहुन्छ" र एन्ड्रोइड स्मार्टफोन किन्नुहोस् भन्ने निर्णय गरेको छ भने तपाईंलाई पछुताउनु पर्दैन। आज हामी तपाईलाई साथ दिन जाँदैछौं सबै आधारभूत एन्ड्रोइड कन्फिगरेसन सेटिंग्स को माध्यम बाट कदम कदम ताकि तपाइँको अनुभव सकेसम्म संतोषजनक छ। हामी तपाईंलाई साथ दिनेछौं तपाईंलाई मार्गनिर्देशन गर्न र तपाईंलाई नयाँ फोन पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्न। तपाईं जहाँबाट आउनुभयो, मैले भने, Android मा स्वागत छ।
1 एन्ड्रोइड भनेको के हो?
2 प्रणाली सबैका लागि खुला छ
3 एन्ड्रोइडमा अनुकूलन तहहरू के हुन्?
4 गुगल खाता कसरी बनाउने
5 नि: शुल्क गुगल सेवाहरू
5.1 कामको लागि गुगल सेवाहरू
5.2 तपाइँ संगठित गर्न
5.3 प्रश्नहरूको उत्तर
5.4 मनोरन्जन र रमाईलो
6 तपाईंको एन्ड्रोइड मोबाइलको आधारभूत कन्फिगरेसन
6.1 Android मा तपाइँको भाषा कसरी सेट गर्ने
6.2 कसरी तपाइँको एन्ड्रोइड उपकरण "नयाँ उपकरण" को रूपमा सेट गर्ने
6.3 हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको लागि एक वाइफाइ नेटवर्क चयन गर्नुहोस्
6.4 हाम्रो गुगल खाताको साथ कसरी लग इन गर्ने।
6.5 अर्को ईमेल खाता कसरी थप्ने
6.6 एन्ड्रोइड मा सुरक्षा र अनलक प्रणाली विन्यास गर्नुहोस्
7 कसरी थाहा पाउने कि मेरो एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम अप टु डेट छ
8 एन्ड्रोइडमा कसरी अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने
9 एन्ड्रोइडमा कसरी अनुप्रयोगहरू स्थापना वा स्थापना रद्द गर्ने
10 एन्ड्रोइडमा आवश्यक अनुप्रयोगहरू
10.1 सामाजिक नेटवर्क
10.2 सन्देश पठाउँदै
11 तपाईको स्मार्टफोनका लागि उपयोगी अनुप्रयोगहरू
12 एन्ड्रोइड सुरक्षा
13 एन्ड्रोइडमा मेरो डेटा कसरी ब्याकअप गर्ने
14 कसरी आईफोनबाट एन्ड्रोइडमा मेरो डाटा स्थानान्तरण गर्ने
14.1 IOS को लागी गुगल ड्राइव
14.2 आईओएस को लागी गुगल फोटोहरु
14.3 सम्पर्क स्थानान्तरण / ब्याकअप सार्नुहोस्
15 तपाईं अब एन्ड्रोइड संसारमा आफूलाई डुबाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ
एन्ड्रोइड भनेको के हो?
यदि तपाईं स्मार्टफोनको यो संसारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, हामी अनन्त प्रतिद्वन्द्वीको साथ लाग्ने छैनौं। तपाईंले त्यो जान्नुपर्दछ एन्ड्रोइड गुगलको मोबाइल अपरेटिंग प्रणाली हो। र के को बारेमा मोबाइल उपकरणहरूको लागि अपरेटिंग प्रणाली संसारमा सब भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। तपाईंको हालसालै पोष्ट गरिएको सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको संख्या दुई अरब भन्दा बढी। त्यहाँ केहि छैन। र आज यो लगभग एप्पलको अपरेटि system प्रणालीसँग प्रतिद्वन्द्वी गर्दछ, जुन प्रयोगकर्ताहरूको संख्या भन्दा दोब्बर छ। हामी त्यो भन्न सक्छौं स्पेन एक एन्ड्रोइड देश हो हाम्रो देशका 92 २% भन्दा बढि स्मार्टफोनहरू हरियो Android प्रणाली अन्तर्गत काम गर्दछन्।
२०१ 2017 एन्ड्रोइडमा यसलाई सुरू भएको १० बर्ष भयो। सक्रिय रूपमा २०० devices देखि मोबाइल उपकरणहरू, ट्याब्लेटहरू, र पहिरिन योग्यमा कार्य गर्दै। गुगलको वित्तीय समर्थनमा सफ्टवेयर कम्पनी "एन्ड्रोइड इंक" द्वारा बनाईएको हो, जुन अन्ततः २०० 2008 मा गुगलले अधिग्रहण गर्ने थियो। उनको मान्यता प्राप्त बुबा एन्डी रुबिन, ईन्जिनियरहरूको एक चयन टोलीसँग आधारित प्रणाली सिर्जना गर्ने उद्देश्यले। लिनक्स यो कसरी एन्ड्रोइड अपरेटिंग प्रणाली प्रकाश मा आए।
प्रणाली सबैका लागि खुला छ
एप्पलको आईओएस प्रणालीमा यो अपरेटि system सिस्टमले दिने फाइदाहरू यो एक खुला प्रणाली हो। कुनै पनि निर्माताले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछ र तिनीहरूलाई तिनीहरूका उपकरणहरूमा अनुकूलित गर्न सक्दछ। Y कुनै विकासकर्ताले उस्को लागि अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्दछ किटका लागि धन्यबाद जुन गुगलले नि: शुल्क डाउनलोडको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। संक्षेप मा, यसलाई को लागी कल्पना गरीएको थियो को लागी स्वतन्त्र उपयोग गर्न को लागी। टचस्क्रिन स्मार्ट उपकरणहरूको लागि एक अपरेटिंग प्रणाली। यसरी, कुनै पनि ब्रान्ड जसले स्मार्टफोन बनाउँछ, अनिवार्य गुगल इजाजतपत्रको साथ, तपाईं अपरेटिंग सिस्टमको रूपमा एन्ड्रोइड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुन एप्पल, उदाहरण को लागी, गर्दैन। यो वर्तमानमा यस्तो प्रवृत्ति हो कि निर्माणकर्ताहरूले पनि आफ्नै ओएस प्रयोग गरे जस्तै ब्ल्याकबेरी उदाहरणका लागि, अधिक विश्वव्यापी प्रणालीको पासोमा पुगे।
एन्ड्रोइड एक हो एक अनुप्रयोग संरचनामा आधारित अपरेटि system प्रणाली। मुख्यहरू, उनीहरूको कार्यक्षमताका लागि आधारभूत मानिन्छ, अपरेटि system प्रणाली द्वारा नै मानकको रूपमा समाहित हुन्छन्। एक घटक वास्तुकला मा निर्मित एक प्रणाली पुन: प्रयोग सरल बनाउन डिजाइन। यसैले, कुनै पनि अनुप्रयोगले उपकरणको श्रोतहरूको प्रयोग गर्न सक्दछ, र यसलाई प्रयोगकर्ता द्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। पछि हामी अनुप्रयोगहरू, उनीहरूको स्थापनाको बारेमा कुरा गर्नेछौं र हामी तपाईंलाई केही सुझावहरू दिनेछौं।
एन्ड्रोइडमा अनुकूलन तहहरू के हुन्?
हामीले वर्णन गरिसकेका छौं, व्यावहारिक रूपमा सबै हालका निर्माणकर्ताहरूले आफ्नो उपकरणहरू जीवनमा ल्याउनको लागि गुगल प्रणाली प्रयोग गर्दछन्। र त्यहाँ केहि फर्महरू छन् जुन अरूबाट आफूलाई अलग पार्ने मनसायले तथाकथित निजीकरण तहहरू प्रयोग गर्दछ। यो हुनेछ, धेरै ग्राफिक तरिकामा व्याख्या, अन्य कपडाको साथ एन्ड्रोइड प्रणाली "ड्रेस" गर्नुहोस्। अपरेटि system प्रणाली उस्तै रहन्छ, तर देखा पर्दा यो फरक छ। छविले देखाउँदछ कि गुगलले बनाएको भन्दा फरक छ। यहाँ अनुकूलन को स्तर एक मौलिक भूमिका खेल्छ त्यो एन्ड्रोइड मा एक लेयर सम्मिलन संग प्राप्त गरीएको छ।
त्यहाँ फर्महरू छन्, जस्तै सोनी, जुन लागू हुन्छ अधिक आक्रामक अनुकूलन तह, केहि मामिलाहरूमा केहि कन्फिगरेसन पहुँच सीमित। शियाओमी जस्ता ब्रान्डहरू, जसको अपरेटिंग सिस्टमको संस्करण, MIUI भनिन्छ, यसको प्रयोगकर्ताहरूबाट धेरै राम्रो समीक्षा प्राप्त गर्दछ। र त्यहाँ छ अन्य जो "शुद्ध" एन्ड्रोइड प्रस्ताव गर्न छनौट गर्छन्, धेरै सफा र कन्फिगर योग्य।
रंगहरु स्वाद गर्न। तर हामी कुनै एन्ड्रोइडको पक्षमा छौ कुनै सीमितता बिना र "भेष बिना"। कहिलेकाँही यी तहहरूको कारणले पहिले नै तरल पदार्थ र राम्रोसँग कार्य गर्ने प्रणाली ढिलो भइरहेको छ अनावश्यक
गुगल खाता कसरी बनाउने
तपाईसँग एन्ड्रोइड स्मार्टफोन नहुन सक्छ, तर यो धेरै सम्भव छ कि तपाईसँग "जीमेल" ईमेल खाता छ। यदि तपाईंसँग यो पहिले नै छ भने, यो तपाईंको पहिचान हुनेछ सबै गुगल सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन। यदि तपाईंले अहिलेसम्म आफ्नो गुगल खाता बनाउनु भएको छैन भने तपाईंले आफ्नो उपकरणको कन्फिगरेसनबाट सुरू गर्नु अघि यो गर्नुपर्नेछ।। यो गर्न तपाईलाई दुई मिनेट भन्दा बढि आवाश्यक पर्दैन। यस एन्ड्रोइड म्यानुअलमा हामी सबै कुरा वर्णन गर्दछौं। प्रक्रिया एक ईमेल खाता सिर्जना गर्नु जस्तै हो किनभने तपाईं त्यो पनि गर्नुहुनेछ। तपाईले फेला पार्न सक्ने समस्या केवल यो हो कि कोहीले पहिले नै तपाईले चाहानु भएको नाम प्रयोग गर्दछ। बाँकीको लागि, व्यक्तिगत डेटा को एक श्रृंखला सहित, तपाईं तुरून्त तपाईको गुगल पहिचान सिर्जना हुनेछ तर यदि तपाईलाई शंका छ भने, हामी यहाँ चरणबद्ध र बिभिन्न तरिकाहरू वर्णन गर्दछौं। गुगल खाता बनाउनुहोस्.
एक पटक पहिचान गरेपछि तपाईं पहुँच गर्न तयार हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठूलो अनुप्रयोग स्टोरमा त्यहाँ छ प्ले स्टोर। उही तरीकाले, तपाईं सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा गुगलले प्रस्ताव गर्ने सबै सेवाहरूको सित्तैमा। सामान्य नियमको रूपमा, ती सबै अनुप्रयोगहरू हुन् जुन हाम्रो उपकरणले पहिले नै स्थापना गरिसकेको छ। उपकरणको ब्रान्डमा निर्भर गर्दै, तिनीहरूसँग फर्म आफ्नै केहि हुन सक्छ जस्तै संगीत प्लेयरहरू, इत्यादि।
नि: शुल्क गुगल सेवाहरू
गुगल हाम्रो जीवन सजिलो बनाउन गम्भीर छ। र हामीलाई प्रदान गर्दछ उपकरणहरूको एक श्रृंखला जसको साथ हामी हाम्रो स्मार्टफोनबाट अधिक प्राप्त गर्न सक्छौं सबैभन्दा सहज तरिकामा। तिनीहरू यति धेरै र यति विविध छन् कि हामी गुगलले नि: शुल्क प्रस्ताव गर्दछ कि सेवाहरूको प्रकारहरू सेक्सनहरूद्वारा भिन्न पार्न सकिन्छ। हाम्रो एन्ड्रोइड गाईडमा हामीले एउटा छान्छौं जुन तपाईंलाई सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव गर्न सक्छ।
कामको लागि गुगल सेवाहरू
यस खण्डमा हामी यसको प्रयोग गर्न सक्दछौं
गुगल कागजात, संयुक्त राष्ट्र अनलाइन पाठ सम्पादक जहाँ हामी तपाईं जहाँ भए पनि कुनै पनि कागजात सम्पादन र साझेदारी गर्न सक्दछौं।
गुगल स्प्रिडशिटहरू त्यो स्प्रिडशिट हो, तर cयसलाई साझेदारीको सम्भावनाको साथ, यसलाई एक वा बढी सम्पादनको लागि सार्वजनिक बनाउँदछ, र यसलाई कहिँ पनि प्रयोग गर्ने बनाउँदछ।
गुगल प्रस्तुतीकरण, तपाईलाई "पावर पोइन्ट" को रूपमा थाहा हुनेछ सबैभन्दा नजिकको चीज। तपाइँको प्रस्तुतीकरणहरू बनाउन र खेल्नको लागि एक धेरै सजीलो-प्रयोग गर्न सकिने प्रोग्राम।
गुगल ड्राइभ, एक सुरक्षित "स्थान" तपाइँको फाइलहरूको प्रतिलिपि राख्न सबै भन्दा बढि प्रयोग गरिएका कागजातहरू, अनुप्रयोग डेटा पनि।
तपाइँ संगठित गर्न
गुगलले हामीलाई अधिक संगठित हुने अवसर पनि दिन्छ। र जहाँसुकै पनि हाम्रो स्मार्टफोनमा सबैभन्दा मूल्यवान सामग्री छ। त्यसोभए हामीसँग अनावश्यक हिसाबले हुनेछ
गुगल फोटोहरू, जसले मात्र हाम्रो क्याप्चरहरू व्यवस्थित गर्न कार्य गर्दछ। मिति वा स्थानहरू द्वारा स्वचालित रूपमा एल्बमहरू बनाउनुहोस्। हामीलाई प्रदान गर्न को अतिरिक्त १ GB जीबी भण्डारण ताकि फोटोहरू हाम्रो उपकरणमा ठाउँ लिन सक्दैन.
गुगल सम्पर्कहरू हामीलाई कहिले पनि फोनहरू परिवर्तन गर्न डराउँदैनन् भण्डारण गरिएका नम्बरहरू हराउँदा, वा तिनीहरूलाई म्यानुअल रूपमा पास गर्नुपर्दा। सम्पर्कहरू तपाईंको गुगल खातासँग सिnch्ख्रोनाइज गर्नुहोस् र तिनीहरू तपाईं जहाँ भए पनि हुनुहोस्.
गुगल पात्रो, गुगल क्यालेन्डर ताकि तपाईं केहि बिर्सनुभयो, र सबै लेखिएको छ। सूचनाहरू, रिमाइन्डरहरू, अलार्महरू, केहि पनि तिमीबाट उम्कने छैन।
हामी किन स्मार्टफोन चाहान्छौं यदि हामी यो केहि सोध्न सक्दैनौ, हैन? हुनुको लागि गुगल तपाईको हातको हत्केलामा यो एक फाइदा हो। पूर्व स्थापित गुगल विजेटको साथ हामी गुगललाई केहि पनि कुरा गरेर सोध्न सक्छौं। वा खोज्नुहोस् र नेविगेट गर्नुहोस् यसको ब्राउजरको प्रसिद्ध अनुप्रयोगको माध्यमबाट। शत्रु
गुगल क्रोम तपाइँको ब्राउजर को प्रसिद्ध अनुप्रयोग को लागी खोज र नेभिगेट गर्न
गुगल नक्शा। जहाँ तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि केहि छ वा त्यहाँ कसरी पुग्ने हो, द्रुत "G" छ तपाईलाई तत्काल मद्दत गर्न। तपाईं जहाँ भए पनि गुगलले तपाईंलाई त्याग्दैन।
गुगल अनुवाद्, यसले बनाउनेछ कि तपाईं जहाँ भए पनि भाषा पनि तपाईंको लागि बाधा हुनेछैन।
मनोरन्जन र रमाईलो
एक स्मार्टफोन धेरै ध्यान विकर्षणको लागि पर्यायवाचक हो। र यो यस्तै छ, हामी सबैलाई लामो समयको प्रतिक्षाबाट केही समयमा मुक्त गरिएको छ। त्यहाँ तिनीहरू पनि छन् जसले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई उनीहरूको मल्टिमेडिया मनोरन्जन केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यसको लागि हामी विभिन्न प्रकारका अनुप्रयोगहरूको मजा लिन सक्दछौं।
YouTube। स्ट्रिमि video भिडियो प्लेटफर्म बराबर उत्कृष्टता। तपाईंको मनपर्ने भिडियोहरू प्ले गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई साझा गर्नुहोस् वा आफ्नै अपलोड गर्नुहोस्।
गुगल प्ले संगीत तपाइँको हातमा एक सक्षम मल्टिमेडिया प्लेयर राख्छ। र तपाईंको उपकरणबाट संगीत बजाउनुको साथसाथै तपाई यस पलको पछिल्लो हिट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। वा तपाइँको मनपर्ने कलाकार द्वारा नवीनतम एल्बम किन्नुहोस्।
गुगल प्ले चलचित्रहरू संगीतको रूपमा, चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू वा शृंखलाहरूमा भर्खरको समाचारहरू पाउनुहोस्।
यी सब भन्दा प्रख्यात सेवाहरू हुन्, तर गुगलले तपाईंलाई अधिक प्रदान गर्दछ। तपाईले देख्नु भएको रूपमा, तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणको साथ सम्भावनाहरूको सम्पूर्ण संसार। के तपाई हराउनु भएको सबै चीज बारे सचेत हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईले एन्ड्रोइड स्मार्टफोन किन्नु भएकोमा पछुताउनु पर्दैन। र यदि तपाईंले अहिलेसम्म खरीद गर्नुभएको छैन भने, जब तपाईं यो पोष्ट पढ्ने सिध्याईनुहुन्छ निश्चित रूपमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुनेछ।
तपाईंको एन्ड्रोइड मोबाइलको आधारभूत कन्फिगरेसन
के तपाईंले पहिले नै यो किन्नुभएको छ? बधाई छ। यदि तपाईंसँग अन्ततः तपाईंको नयाँ Android उपकरण तपाईंको हातमा छ भने यो तयार हुनको लागि समय आएको छ। यस एन्ड्रोइड म्यानुअलमा हामी तपाइँलाई सुरुवाती कन्फिगरेसन पूरा गर्न चरण-चरणमा मार्गदर्शन गर्दछौं। तपाईंको नयाँ फोन यसको बक्सबाट हटाए पछि, हामीले गर्नु पर्छ हाम्रो सिम कार्ड पहिले थप्नुहोस्। र कुनै डर बिना, कन्फिगरेसनको साथ सुरू गर्न पावर बटन थिच्नुहोस्।
Android मा तपाइँको भाषा कसरी सेट गर्ने
यो हामीले पहिलो कार्य गर्नुपर्दछ जब हामीले हाम्रो नयाँ एन्ड्रोइड उपकरण खोल्छौं। कूटनीतिक स्वागत सन्देश पछि जुन उनले हामीलाई अभिवादन गरे हामीले भाषा छनौट गर्नुपर्दछ जुन हाम्रो स्मार्टफोनसँग हामी त्यो क्षणबाट अन्तरक्रिया गर्नेछौं। भाषाहरूको विस्तृत सूचीमा हामी उपयुक्तलाई छनौट गर्नेछौं, र त्यो हो।
यदि कुनै पनि समयमा हामी भाषा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं प्रारम्भिक कन्फिगरेसनमा छनौट गरिएको हामी यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्छौं। हामी हाम्रो स्मार्टफोनको मेनुमा निर्देशित गर्दैनौं «सेटिंग्स»। र यहाँबाट, सामान्यतया भित्र प्रवेश गर्ने "उन्नत सेटिंग्स" हामीले विकल्प खोज्नु पर्छ "व्यक्तिगत"। यस स्थानबाट, क्लिक गरेर "भाषा र पाठ इनपुट" हामी भाषाहरूको सूची पहुँच गर्न सक्दछौं र यसलाई हामीले चाहेकोमा परिवर्तन गर्न सक्दछौं।
कसरी तपाइँको एन्ड्रोइड उपकरण "नयाँ उपकरण" को रूपमा सेट गर्ने
एन्ड्रोइड प्रस्ताव को नयाँ उपलब्ध संस्करण नयाँ कन्फिगरेसन विकल्पहरू जब हामी स्मार्टफोन सुरू गर्दछौं। यसैले, यदि नयाँ फोनले अघिल्लोलाई नवीकरण गर्ने कार्य गर्दछ भने हामीसँग यो सजिलो हुनेछ। यस बिन्दुबाट, हामी पुरानो फोन जस्तै समान विकल्पहरूको साथ नयाँ फोन कन्फिगर गर्न सक्दछौं। हामीले स्थापना गरेका उही अनुप्रयोगहरूको साथ पनि, वाइफाइ कुञ्जीहरू इत्यादि।
तर अब यो हाम्रो मामला होईन। र आधारभूत कन्फिगरेसनको साथ जारी राख्न हामीले विकल्प छान्नु पर्छ "नयाँ उपकरणको रूपमा सेट अप गर्नुहोस्"। यस तरिकाले निम्न चरणहरू र सेटि settingsहरू पहिलो पटक प्रविष्टि हुनेछन्। त्यसो भए अर्को चरणमा जान दिनुहोस्।
हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको लागि एक वाइफाइ नेटवर्क चयन गर्नुहोस्
यद्यपि वाइफाइ नेटवर्क छनौटको चरण सेटअप पूरा गर्न पूर्ण रूपमा आवश्यक छैन नयाँ उपकरणको। यदि यसलाई अत्यधिक इन्टरनेट जडानको साथ यी अपरेशन्सहरू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस तरिकाले उपकरण कन्फिगरेसन पूर्ण हुनेछ। उपलब्ध वाइफाइ नेटवर्कहरूको सूचीमा, हामीले हाम्रो चयन गर्नुपर्नेछ। जारी राख्नको लागि, पहुँच कोड प्रविष्ट गरेपछि, हामीले «जारी राख्नुहोस् select चयन गर्नुपर्दछ।
दिनभरि एक भन्दा बढि Wi-Fi नेटवर्क प्रयोग गर्न यो सामान्य छ। यस कारणका लागि, र ताकि तपाईं तपाईंलाई आवश्यक सबै नेटवर्कहरू थप्न सक्नुहुनेछ, हामी वर्णन गर्दछौं कुनै पनि समयमा यो कसरी गर्ने। हामी आइकन फेरि पहुँच गर्दछौं «सेटिंग्स» हाम्रो उपकरणको र विकल्प चयन गर्नुहोस् «Wifi "। वाई-फाई जडान सक्रिय गरेपछि, हामी सूचीमा उपलब्ध नेटवर्कहरू हेर्न सक्षम हुनेछौं। केवल हामीले चाहेको नेटवर्क छान्नु पर्छ र पहुँच कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्। हाम्रो उपकरणहरू स्वचालित रूपमा सुरक्षित नेटवर्कहरूमा जडान हुनेछ जब हामी यसको कभरेज भित्र हुन्छौं।
हाम्रो गुगल खाताको साथ कसरी लग इन गर्ने।
हामी लाग्छौं कि हामीसँग पहिले नै गुगल खाता छ वा यो हामीले माथिका निर्देशनहरूको अनुसरण गरेर सिर्जना गरेको हो। यो पहुँच र हाम्रो खाता द्वारा प्रस्तुत सबै सेवाहरूको मजा लिन सक्षम हुनु धेरै सरल छ। हामी केवल गर्न हुनेछ हाम्रो खाता "xxx@gmail.com" को साथ हामीलाई पहिचान गर्नुहोस् र हाम्रो पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक चोटि यो गरेपछि, हामीले सेवाका सर्तहरू स्वीकार्नुपर्नेछ अर्को चरणको साथ जारी राख्नका लागि।
यो "gmail" खाता बिना कन्फिगरेसन जारी राख्न सम्भव छ। तर फेरि हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं तपाईले यो संग गर्नुहोस्। यस तरिकामा हामी गुगलले प्रदान गर्ने सेवाहरूको प्याकेजको पूर्ण आनन्द लिन सक्दछौं। र त्यसो भए कन्फिगरेसन सबै कुरामा अझ पूर्ण हुन्छ।
अर्को ईमेल खाता कसरी थप्ने
एक पटक अघिल्लो चरण समाप्त भएपछि, कन्फिगरेसन मेनूले हामीलाई सोध्नेछ कि हामी अर्को ईमेल खाता थप्न चाहान्छौं। यहाँ हामी प्रयोग गर्ने बाँकी ईमेल खाताहरू थप्न सक्छौं निश्चित रूपमा। Google वा अन्य कुनै अपरेटर द्वारा स्वामित्व प्राप्त। जिमेल अनुप्रयोगले फोल्डरहरूमा ती संगठित गर्ने बारे ख्याल राख्छ। तपाईं एकै समयमा सबै मेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ वा व्यक्तिगत रूपमा इनबक्सहरू, पठाइएका, आदि चयन गर्नुहोस्।
Wi-Fi नेटवर्कको रूपमा, एक पटक उपकरण कन्फिगरेसन प्रक्रिया समाप्त भएपछि, हामी पनि आवश्यक अनुसार धेरै ईमेल खाताहरू थप्न सक्छौं। यसको लागि हामी बारम्बार आइकनमा जान्छौं «सेटिंग्स» जहाँ हामीले विकल्प खोज्नु पर्छ "खाताहरू"। यहाँबाट हामी चयन गर्नेछौं "खाता थप्नुहोस्" र हामी खाता नाम, पासवर्ड, आदि प्रविष्ट गर्नेछौं। र तुरून्त यो बाँकीको साथ इनबक्समा देखा पर्नेछ।
एन्ड्रोइड मा सुरक्षा र अनलक प्रणाली विन्यास गर्नुहोस्
यस पक्षमा, सुरक्षा विकल्पहरू जुन हाम्रो उपकरणले हामीलाई प्रस्ताव गर्न सक्दछ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यो हो, यो तपाईंसँग सम्बन्धित लाभहरूमा निर्भर गर्दछ। वर्तमानमा लगभग सबै नयाँ उपकरणहरूले सुसज्जित छन् फिंगरप्रिन्ट रिडर। र त्यहाँ त्यस्ता फोनहरू छन् जुन अझै पनि यस प्रविधिलाई समाहित गर्दैन, त्यहाँ त्यस्ताहरू पनि छन् जुनसँग आइरिस पाठक o अनुहार मान्यता.
यदि हाम्रो उपकरणमा सुरक्षा प्रणालीमा कुनै खबर छैन भने हामी चिन्तित हुनु हुँदैन। यो अझै तेस्रो पक्षहरूबाट सुरक्षित हुन सक्छ यदि हामी गुगलले प्रदान गरेको उपकरणहरूको राम्रो उपयोग ग .्यौं भने। हामीसँग सँधै अनलक ढाँचा हुन सक्छ वा यो एक मार्फत गर्नुहोस् संख्यात्मक कोड। यस चरणमा हामी केवल एक चयन गर्न सक्दछौं वा तिनीहरूलाई एक अर्कामा मिलाउन सक्छौं। एक वा अर्को तरिकामा हामी सँधै एउटा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं।
यो हाम्रो उपकरणको आधारभूत कन्फिगरेसनको अन्तिम चरण हो, तर त्यसको लागि कम्तिमा पनि महत्त्वपूर्ण छैन। एक पटक हामीले सुरक्षा प्रणाली छनौट गरेपछि, हाम्रो स्मार्टफोन लगभग तयार छ। यी सेटिहरू प्राय व्यावहारिक रूपमा सबै एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा समान हुन्छन्। तर अर्डर अनुकूलन तह र हामीसँग रहेको अपरेटिंग सिस्टमको संस्करणमा निर्भर रहन सक्छ।
हाम्रो स्थानको आधारमा, हामी उपयुक्त समय क्षेत्र छनौट गर्नेछौं। त्यहाँबाट हामी यो कुरा पक्का गर्न सक्दछौं कि उपकरणले देखाइएको समय सही छ।
अब हामी पूर्ण क्षमतामा हाम्रो नयाँ उपकरणको मज्जा लिन सक्दछौं। तर पहिले, हामी तपाईंलाई निजीकरणको एक सानो स्पर्श दिन सक्छौं। निस्सन्देह यो अपरेटि system प्रणालीको एउटा हिलमार्क हो, यसलाई हामी आफैंलाई मन परेको जस्तो हुने सम्भावना। उपकरणको आधारभूत कन्फिगरेसनबाट हामी थिम, रिंगटोन वा सन्देश चयन गर्न सक्छौं जुन हामीलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो। उस्तै उसलाई वालपेपर लक वा स्क्रीन उपयोग। वा सूचनाको र colorsहरू पनि प्रत्येक सूचनामा लिंक गरियो।
कसरी थाहा पाउने कि मेरो एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम अप टु डेट छ
गुगलले प्रदान गरेको बहु पूर्व स्थापित अनुप्रयोगहरूमा भर पर्दै, स्मार्टफोन पहिले नै कुनै पनि कार्यको लागि पूर्ण रूपले परिचालनमा छ। तर बाह्य अनुप्रयोगहरूको स्थापनासँग अघि बढ्नु अघि, यो जाँच गर्न रोचक हुन्छ कि हाम्रो सफ्टवेयर अप टु डेट छ। यो गर्नका लागि, उपकरण मेनू भित्र हामी जान्छौं "सेटिंग्स"। हामी विकल्प खोज्नेछौं "मेरो उपकरणको बारेमा" र हामी यसमा क्लिक गर्नेछौं। एक पटक यो विकल्प खुला भएपछि हामीले चयन गर्नुपर्दछ "अद्यावधिकहरू खोज्नुहोस्" (वा एक धेरै समान विकल्प)। फोन आफैंले जाँच गर्नेछ कि यो स्थापित गर्न को लागी कुनै अपडेट छ भने।
यदि त्यहाँ पेन्डि update अद्यावधिक छ भने, हामीले केवल क्लिक गर्नुपर्नेछ "डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्" र तुरून्त डाउनलोड सुरु हुन्छ, जुन स्वचालित रूपमा स्थापना हुनेछ। यस प्रक्रियाले केहि मिनेट लिन सक्दछ र हाम्रो फोन पछिल्लो हुनेछ। त्यो नोट गर्नुहोस् तपाईं पचास प्रतिशत भन्दा कम ब्याट्रीको साथ अपडेट डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुने छैन.
एक व्यावहारिक सल्लाह को रूप मा, यो छ वाईफाई जडानको साथ यो अपरेशन गर्न सुविधाजनक। अपरेटिंग सिस्टमको अपडेटको डाउनलोडले हाम्रो डाटा खपत बढाउन सक्दछ।
एक अप-टु-डेट अपरेटिंग सिस्टम सधैं अधिक सुरक्षित र प्रभावशाली हुन्छ। यन्त्रको आफ्नै फंक्शनलिटीहरू र अनुप्रयोगहरूको साथ अप्टिमाइजिंग नयाँ संस्करणको उपलब्ध हुनु राम्रो हुन्छ। अप-टु-डेट हुनाले तपाईंलाई अनुप्रयोग अनुकूलता समस्याहरूको सामना गर्नबाट रोक्दछ, र ब्याट्री खपत पनि सुधार गर्न सक्दछ।
एन्ड्रोइडमा कसरी अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने
अब हो। हाम्रो स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्न तयार छ। हामी अब सकेसम्म धेरै अनुप्रयोगहरू डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्दछौं। र हाम्रो मुख्य सल्लाह भनेको हामी यो गर्छौं आधिकारिक स्टोरबाट, गुगल प्ले स्टोर। यसमा हामी हाम्रो सेवामा व्यावहारिक रूपमा हामीले सोच्न सक्ने हरेक चीजको लागि करीव एक लाख अनुप्रयोगहरू भेट्टाउने छौं। हामीले भर्खर Play Store प्रतिमा थिच्नु पर्छ जुन पूर्वनिर्धारित पूर्वनिर्धारित आएको छ र हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
द्वारा क्रमबद्ध कोटीहरू जुन हामी फेला पार्न सक्छौंउदाहरण को लागी, मनोरन्जन, जीवनशैली, फोटोग्राफी, शिक्षा, खेलहरू, र यति मा तीस भन्दा बढी विकल्प। हामी सबैभन्दा लोकप्रिय बीचमा खोजी गर्न, वा खेलहरू, चलचित्रहरू, संगीतको लागि खोज्न सक्छौं। अन्तहीन विकल्पहरू जुन हामी पक्कै पनि हामीले चाहेको अनुप्रयोग फेला पार्नेछौं।
हाम्रो उपकरणहरूमा एक अनुप्रयोग स्थापना गर्न, पहिलो चीज भनेको Play Store को पहुँच गर्नु हो। एक पटक भित्र, जब हामीले चाहेको अनुप्रयोग भेट्टायौं, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जब हामी यसलाई खोल्छौं, हामी यसको सामग्रीसँग सम्बन्धित जानकारी हेर्न सक्दछौं, अनुप्रयोगको स्क्रिनसटहरू पनि हेर्नुहोस्, र टिप्पणीहरू पनि पढ्नुहोस् र प्रयोगकर्ता रेटिंगहरू पनि हेर्नुहोस्। साथै अनुप्रयोग नि: शुल्क वा भुक्तान गरिएको जाँच गर्दै।
एन्ड्रोइडमा कसरी अनुप्रयोगहरू स्थापना वा स्थापना रद्द गर्ने
यदि तपाईंले हामीलाई विश्वस्त गर्नुभयो भने, ठीक हामीले "स्थापना" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ। एप्लिकेसन स्वतः डाउनलोड गर्न र हाम्रो उपकरणमा आफैंमा स्थापना गर्न सुरू गर्दछ। र एकचोटि स्थापना समाप्त भएपछि, अनुप्रयोगले डेस्कटपमा नयाँ प्रतिमा सिर्जना गर्दछ। यसलाई खोल्न र यसलाई प्रयोग गर्न, हामीले केवल यसको प्रतिमामा क्लिक गर्नुपर्दछ। के तपाई सजिलो देख्नुहुन्छ? अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्न यो सजिलो हुन सक्दैन।
तर, मैले डाउनलोड गरेको अनुप्रयोग मनपर्दैन भने के हुन्छ? कुनै समस्या छैन, हामी पनि तिनीहरूलाई सजिलो अनइन्स्टल गर्न सक्छौं। एउटा विकल्पमा जानुहोस् "सेटिंग्स"। यहाँबाट हामी चयन गर्दछौं "अनुप्रयोगहरू" र हामी स्थापित अनुप्रयोगहरूको सूची देख्नेछौं। हामीले अनइन्स्टल गर्न चाहेको अनुप्रयोगमा क्लिक गरेर, एक मेनू देखा पर्दछ जुन हामीले चयन गर्नुपर्दछ "स्थापना रद्द गर्नुहोस्"। वा, हामीले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड संस्करणमा निर्भर गर्दै कुनै पनि अनुप्रयोग थिचेर र होल्ड गर्दा, तिनीहरू प्रत्येकमा क्रस देखिन्छ। र क्रसमा क्लिक गरेर, अनुप्रयोग पनि स्थापना हटाइनेछ।
एन्ड्रोइडमा आवश्यक अनुप्रयोगहरू
प्ले स्टोरले हामीलाई प्रदान गर्ने विकल्पहरूको समूहलाई धन्यवाद, प्रत्येक स्मार्टफोन अर्को भन्दा फरक छ। तपाईंको उपकरणले तपाईंको बारेमा धेरै भन्छ। हामीले स्थापना गरेका अनुप्रयोगहरू हेरेर हामी जान्न सक्दछौं हाम्रो रुचि र प्राथमिकताहरू के हुन्। खेल, खेल, संगीत, फोटोग्राफी। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जुन हामी डाउनलोड गर्न सक्दछौं र यो छनौट गर्न गाह्रो छ कि सबैलाई संतुष्ट पार्छ।
तर पनि, हामी विशाल बहुमतसँग सहमत हुन सक्छौं "मौलिक" अनुप्रयोगहरूको श्रृंखला"। र हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन जाँदैछौं जुन हाम्रो लागि सिफारिस गरिएको हो। ती मध्ये हामीले प्रत्येक क्षेत्रको सब भन्दा लोकप्रिय चयन गरेका छौं। तिनीहरूलाई स्थापना गरेपछि तपाईं आफ्नो नयाँ एन्ड्रोइड फोनबाट अधिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
सामाजिक नेटवर्क को आफ्नै अनुप्रयोगहरु हुन् स्मार्टफोनका लागि डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरूको "abc"। र तिनीहरू अपरेटिंग प्रणाली, ब्रान्ड र मोडेलहरू भन्दा माथि छन्। त्यसैले हामी ती अनुप्रयोगहरूलाई वेवास्ता गर्न सक्दैनौं जुन प्रयोगको धेरै घण्टा खजान हुन्छ। स्मार्टफोन यी अनुप्रयोगहरू बिना व्यावहारिक रूपमा अकल्पनीय छ। तिनीहरू एक अर्काको लागि र यसको विपरित बस्छन्।
को रूपमा मानिन्छ नेटवर्क को नेटवर्क, हामी तपाईंलाई थोरै बताउन सक्छौं जुन यस सामाजिक नेटवर्कको बारेमा थाहा छैन। तथ्य यो हो कि यदि तपाईले एउटा स्मार्टफोनमा कदम चाल्ने निर्णय गर्नु भएको छ र तपाईसंग अझै फेसबुक खाता छैन भने यो समय हो।
अर्को आवश्यक सामाजिक नेटवर्कहरू संसारसँग सञ्चारमा हुन। मूल रूपमा माइक्रोब्लगिंग सेवाको रूपमा संकल्पित। र यसको प्रयोगको लागि धन्यवाद रूपान्तरण गरियो, र निश्चित रूपमा यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई एक वास्तविक संचार उपकरण। व्यक्तित्व, अधिकारीहरू, पेशेवर र शौकिया मिडिया जानकारी र राय को ककटेलमा राम्रोसँग जोडिन्छ जुन हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौं।
फोटोग्राफी प्रेमीहरूको लागि सामाजिक नेटवर्कलाई वा यो यो पहिलो पटक हाम्रो स्मार्टफोनमा आयो। हाल परिवर्तित एक शक्तिशाली प्लेटफर्म जसमा व्यक्तिहरू, फोटोग्राफहरू, कथाहरू र चासोको कम्पनीहरू पत्ता लगाउन। इन्स्टाग्राम नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट हराउन सक्दैन।
संचार भनेको टेलिफोनको पहिलो लक्ष्य होवा, स्मार्ट वा छैन। र हामीलाई थाहा छ, हाम्रो संचारको हालको तरीका परिवर्तन भएको छ। सायद अब कुनै फोन कल गरियो। र तपाईंको हातमा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको साथ, ती मध्ये कम्तिमा दुई स्थापना गर्न यो बिल्कुल अनिवार्य छ।
Es संसारको सबैभन्दा डाउनलोड र प्रयोग मेसेजिंग अनुप्रयोग। आज कसले व्हाट्सएप प्रयोग गर्दैन? त्यहाँ केहि फर्महरू छन् जुन यो एप्लिकेसनलाई समाहित गर्दछ, जस मध्ये हामी पूर्व-स्थापित पाउँछौं। एक मौलिक अनुप्रयोग संसारमा हुन
धेरैले "अन्य" को रूपमा लिने। तर अनगिन्ती तुलनाहरूमा व्हाट्सएप भन्दा राम्रो छनौट गरियो। यसको सार यसको प्रतिद्वन्द्वी को जस्तै छ। तर एक संग अपडेटहरूमा निरन्तर कार्य र विभिन्न प्रकार्यहरू कार्यान्वयनको साथ वाट्सएप भन्दा अधिक बहुमुखी हुनको लागि प्रबन्ध गर्दछ।
तपाईको स्मार्टफोनका लागि उपयोगी अनुप्रयोगहरू
माथि उल्लिखित अनुप्रयोगहरू ती हुन् जुन तपाईंले आज देख्नुहुने सबै स्मार्टफोनमा देख्नुहुनेछ। तर Google Play Store को विशालतामा त्यहाँ अधिकको लागि ठाउँ छ। र त्यहाँ छ अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंलाई तपाईंलाई आवश्यक परेको लागि मात्र सेवा गर्न सक्छ। निस्सन्देह अनुप्रयोगहरू ती तपाईको स्मार्टफोनलाई उपयोगिता को एक बिन्दु दिन्छ र कार्यक्षमता।
त्यसकारण, तल हामी केही अनुप्रयोगहरू सिफारिस गर्न जाँदैछौं जुन हामीलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ र त्यो हामी दैनिक प्रयोग गर्दछौं। धेरैको लागि, स्मार्टफोन संचार र मनोरन्जनको अर्को रूप हो। तर धेरै अरूलाई यो एक उपयोगी काम उपकरण हो जसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्न सक्दछ।
यो सबै राख्नको लागि ठाउँयो कसरी एप्लिकेसनले आफूलाई परिभाषित गर्दछ कि तपाइँलाई अधिक व्यवस्थित हुन मद्दत गर्दछ। नोटबुकको रूपमा संकल्पित तर अधिक काम गर्दछ। तपाईं फोटोहरू, फाईलहरू, अडियोहरू, वा पाठ नोटहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यहरू गर्न वा कार्य गर्नका लागि अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ। अफिसका लागि वा तपाईंको चीजहरूको लागि सबैभन्दा पूर्ण अनुप्रयोगहरू मध्ये एक र यो सब भन्दा बढि विकसित भएको छ।
यस अनुप्रयोगको बारेमा के नयाँ र उपयोगी छ त्यो हो तपाईं यसलाई तपाईंको कुनै पनि उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईं जहिले पनि तिनीहरूलाई एकै साथ सिंक्रोनाइज हुनेछ। त्यसोभए तपाईले आफ्नो फोन वा ट्याब्लेटमा नोट खोज्न चिन्ता लिनु पर्दैन। के तपाईं Evernote मा लेख्नुहुन्छ तपाईं प्रयोग सबै उपकरणहरूमा हुनेछ। सबैभन्दा उपयोगी अनुप्रयोग मध्ये एक तपाईले फेला पार्नुहुनेछ।
Evernote - नोट्स आयोजक र दैनिक योजनाकार
विकासकर्ता: Evernote निगम
अन्य कामको आयोजनका लागि उत्तम उपकरण। प्रदर्शन गर्न आदर्श समूह कार्य कार्यहरू. एउटा बोर्ड सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई साझेदारी गर्नुहोस् तपाईसँग जोसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। तिमी सक्छौ स्तम्भहरूमा सूची बनाउनुहोस् धेरै दृश्य Y तिनीहरूलाई कार्डमा भर्नुहोस्उदाहरण को लागी, to-do बाट। यी कार्डहरू सजिलै स्तम्भबाट स्तम्भमा ड्र्याग गर्न सकिन्छ उदाहरणका लागि डोजबाट पूरा कार्यहरूमा।
यदि तपाईं एक टोलीसँग कार्यालय वा कार्यहरू साझेदारी गर्नुहुन्छ भने हामी आफैंलाई व्यवस्थित गर्ने बढी व्यावहारिक र उपयोगी तरिका सोच्न सक्दैनौं। तपाइँको सहयोगीहरु संग तपाइँको बोर्ड साझा गर्नुहोस्। A) हो पेन्डिंग र सम्पन्न भएको काम बारे सबैलाई अपडेट जानकारीमा पहुँच हुनेछ। एक अत्यधिक सिफारिश अनुप्रयोग।
Trello: कोहि संग कोहि पनि संगठित, कहीं पनि!
विकासकर्ता: ट्रेलो, Inc.
एउटा अनुप्रयोग जुन सँधै हाम्रो मनपर्नेहरू बीचमा स्थान जित्छ। को आदर्श वाक्य संग "पछिका लागि बचत गर्नुहोस्", हामीलाई रुचिकर हुने कुनै पनि कुरा नगुमाउन सहयोग गर्दछ। यसलाई तपाईंको "खल्ती" मा राख्नुहोस् र यसलाई पढ्नुहोस् जब तपाईंसँग समय हुन्छ। तपाईं असीमित लेख र समाचार बचत गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईं तिनीहरूलाई अर्डर पनि गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यो तपाईंलाई उत्तम सूट गर्दछ। निस्सन्देह हामी मध्ये एक जो रोकिदैन को लागी एक उपकरण बनाईएको छ। र यो हाम्रो लागि कुनै महत्त्वपूर्ण लेख नछुटाउन अत्यन्त उपयोगी छ। के हामीलाई वास्तवमै चासो छ।
पकेट उपयोगी छ जति यो प्रयोग गर्न सजिलो छ। तपाइँको "खल्ती" मा प्रकाशन बचत गर्नु छिटो र सजिलो छ। स्थापना पछि पकेटले यसको आइकनको साथ एक विस्तार समावेश गर्दछ। साझेदारी विकल्प प्रयोग गरेर हामी स्वचालित रूपमा जेबमा बचत गर्न सक्दछौं। र हामीले केवल हामीले पहुँचको लागि सबै चीजहरू खोजी गर्न सक्छौं जुन हामीले पछि बचत गर्न चाहेका छौं। एक महान विचार जुन हाम्रो लागि ठूलो सहयोगी हुन सक्छ।
पकेट: बचत गर्नुहोस्। पढ्नुहोस् बढाउनुहोस्।
विकासकर्ता: मोजिला निगम
यो अनुप्रयोग पकेट जस्तै मिल्दोजुल्दो विचारको साथ डिजाइन गरिएको हो। यद्यपि यसमा मिडियाका अन्य प्रकारहरू सामेल छन्। पोडकास्टको संसार यस प्रकारको प्लेटफर्मलाई धेरै र अधिक पूर्णांकहरू प्राप्त गर्नुहोस्। हास्य, मनोरन्जन, संस्कृति वा संगीत कार्यक्रमहरू। सबै iVoox मा मिल्दछ। एक विशाल र धेरै राम्रो संगठित प्लेटफर्म जहाँ तपाईं आफ्नो मनपर्ने रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं चाहनुहुन्छ.
यदि तपाईं कहिले पनि रेडियो सुन्न सक्नुहुन्न तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दछ, सम्भावनाहरू यो पहिले नै iVoox मा छ। तपाईं विभिन्न प्रकाशनहरूमा सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। यो तरीकाले तपाईलाई थाहा हुनेछ जब तपाईको स्वाद र तपाईको अनुगमन गरिएका कार्यक्रमहरुमा सम्बन्धित नयाँ सामग्री छ। सबै कामको लागि हुने छैन, हैन? तपाईको फुर्सतको समयको लागि उत्तम सहयोगी।
पोडकास्ट र रेडियो iVoox - सीमा बिना अडियो
विकासकर्ता: iVoox पोडकास्ट वाई रेडियो
हामी तपाईंलाई लामो समय सम्म रोकिएन अनुप्रयोगहरूमा सल्लाह दिन सक्छौं। यी केहि हुन् जुन हामी धेरै प्रयोग गर्छौं र हामी सबैभन्दा उपयोगी ठान्दछौं। तर प्रत्येक प्रयोगकर्ता एक विश्व हो। सबै भन्दा राम्रो सल्लाह भनेको Play Store मा सिधा डाईभ गर्नु र तपाईंको विशेष "खजाना" फेला पार्नु हो। यदि तपाईंलाई केहि सुरक्षितको लागि अनुप्रयोग चाहिन्छ भने यो गुगल अनुप्रयोग स्टोरमा छ।
यो पढ्न र सुन्न सामान्य छ एन्ड्रोइड एक सुरक्षित अपरेटिंग प्रणाली हैन। वा कम्तिमा यो एक सय प्रतिशत छैन। र आंशिक रूपमा यो सत्य हो। केहि चीज, अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने प्रणाली, यो सामान्य छ कि यो मालवेयरले सबैभन्दा बढी आक्रमण गरेको छ। हाम्रो उपकरण सुरक्षित राख्नका लागि हाम्रो डिस्पोजलमा एप्लिकेसनहरू र एन्टिभाइरसहरूको श्रृंखला छ जुन हाम्रो मोबाइलको "सफाई" नियन्त्रण गर्न को लागी हो।
तपाईंलाई ध्यान राख्नु पर्छ कि हाम्रो उपकरणहरूको सुरक्षा जोखिममा हामी तिनीहरूलाई खुलासा गर्न मा धेरै निर्भर गर्दछ। संदिग्ध प्रतिष्ठाका साथ वेबसाइटहरूमा पहुँच। शंकास्पद ईमेलहरू खोल्नुहोस्। वा केहि कम गुणवत्ता, विज्ञापन-ग्रस्त अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्दै। हामी देख्न सक्छौं, संक्रमण को धेरै सम्भावित प्रकारहरू छन्। भाग्यवस, एन्ड्रोइड सुरक्षा को सुधार गर्न लगातार काम गरिरहेको छ। र यो सम्भावित खतरनाक अनुप्रयोगहरूमा प्ले स्टोरबाट प्रतिबन्ध लगाएर गहन जाँच गर्दैछ।
यसको स्थापनादेखि नै एन्ड्रोइडको एक सक्रिय प्रयोगकर्ताको रूपमा, मैले भन्नु पर्दछ कि मैले मेरो स्मार्टफोनमा भाइरस संक्रमणको कारणले कुनै गम्भीर समस्याको सामना गरेको छैन। र यो एक तथ्य हो, जुन यो कम्प्युटरमा हुन्छ, त्यो उपकरणमा फाईलहरूको स्थिर विश्लेषणले प्रोग्राम वा अनुप्रयोग बनाउँदछ, यसको अपरेसन ढिला हुँदै जान्छ। त्यसकारण, भाइरसको समस्याबाट जोगिन केही प्रदर्शन नगरीकन हामीले हामीले उपभोग गरेको सामग्री र यसको मूलसँग केही सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
तर यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ शान्तपूर्वक निद्रामा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर जहाँ तपाइँ तपाइँको पासवर्डहरू र डेटा पहुँच गर्नुहुन्छ जहाँ सुरक्षित हुन्छ, उत्तम छ कि तपाइँ एन्टिभाइरस अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्। एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ Security 360० सुरक्षा, सबैभन्दा विश्वसनीय मोबाइल सुरक्षा सफ्टवेयर मानिन्छ संसारको। व्यर्थमा होइन योसँग Play Store मा of मध्ये 4,6..XNUMX को नोट छ। दुईसय भन्दा बढी डाउनलोडहरू हुनुको साथै।
सुरक्षित सुरक्षा - एन्टिभाइरस, बूस्टर, फोन क्लीनर
विकासकर्ता: सुरक्षित सुरक्षा विकास
एन्ड्रोइडमा मेरो डेटा कसरी ब्याकअप गर्ने
सामान्य नियमको रूपमा, हाम्रो स्मार्टफोनले हाम्रो लागि मूल्यवान जानकारी समावेश गर्दछ। कहिलेकाँही सन्देश, वा फोटो र भिडियोको रूपमा। वा कार्य कागजातहरू जुन हामीले हराउनु हुँदैन। हाम्रो सबै डाटा सुरक्षित छ भनेर दुर्घटना, वा तेस्रो पक्षको पहुँच, गुगलले हामीलाई उपलब्ध गराउने उपकरणहरू प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ।
धन्यवाद गुगल सम्पर्क, गुगल फोटो वा गुगल ड्राइव, हामीसँग हाम्रो सम्पर्कहरू, फोटोहरू, फाइलहरू वा कागजातहरू सुरक्षित र कहिँ पनि हुन सक्छ। तर यदि हामी के चाहान्छौं भने मात्र यन्त्रमा ब्याकअप प्रतिलिपि सिर्जना गर्ने हो भने हामी तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर बताउनेछौं। हाम्रो ब्याकअप प्रतिलिपि बनाउन हामीले विकल्प खोल्नु पर्छ «सेटिंग्स»। हामी उन्नत सेटिंग्समा जान्छौं र खोजी गर्दछौं "व्यक्तिगत"। एक सेटिंग्स हो "ब्याकअप".
यस विकल्प भित्र हामीसँग धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्। हामी उपकरणमा हाम्रो डाटा प्रतिलिपि गर्न सक्दछौं वा यो हाम्रो गुगल खाता मार्फत गर्न सक्दछौं। यसको लागि हामी स्मार्टफोनमा हाम्रो आफ्नै खाताको साथ पहिचान हुनुपर्दछ। यहाँबाट हामी नेटवर्क सेटि settingsहरू पनि पुन: भण्डारण गर्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि अपरेटरको परिवर्तनको मामलामा। र हामी कारखाना डाटा पनि पुनर्स्थापना गर्न सक्दछौं, यदि हामी आफ्ना उपकरणहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउन चाहन्छौं भने।
अघिल्ला सबै चरणहरू जुन हामीले वर्णन गरेका छौं धेरै उपयोगी हुनेछ यदि तपाईं एन्ड्रोइड उपकरणमा नयाँ हुनुहुन्छ भने। र ती पनि हुन सक्दछन् यदि तपाइँ मोबाइल टेक्नोलोजीहरूको यसमा तपाईको सुरूवात हुनु अघि। हामीले पूर्ण मार्गनिर्देशन बनाउने कोशिश गरेका छौं कि तपाईं कुनै पनि समयमा हराउनु हुँदैन। तर यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ कि तपाईं स्मार्टफोनको दुनियामा नयाँ हुनुहुन्न। र हो तपाईं एन्ड्रोइडमा हुनुहुन्छ.
त्यसोभए यो गाइडलाई अधिक बहुमुखी बनाउन हामी एक थप चरण पनि सामिल गर्नेछौं। यो हामी संसारको अग्रणी मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीमा सामेल हुन चाहने सबैका लागि यो स्वागतम कार्यलाई कसरी गर्ने छौं। नयाँ प्रयोगकर्ताहरू र ती जो अन्य अपरेटिंग प्रणालीहरूबाट आएका छन्। र त्यो कि एक अपरेटिंग प्रणालीबाट अर्कोमा संक्रमणले कुनै अवरोध खडा गर्दैन।
कसरी आईफोनबाट एन्ड्रोइडमा मेरो डाटा स्थानान्तरण गर्ने
गुगलबाट उनीहरूले सँधै आईफोनबाट प्रयोगकर्ताहरूको एन्ड्रोइडमा सम्भावित प्रवासनलाई ध्यानमा लिएका छन्। र बर्षौंदेखि यसले अनुप्रयोगहरू विकास गरिरहेको छ जुन डाटालाई एक प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा सार्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यद्यपि कहिलेकाँही प्रक्रिया कठिन र जटिल लाग्न सक्छ। गुगलले केहि प्रस्ताव गर्दछ उपकरणहरू जसले एन्ड्रोइडबाट आईओएस डाटामा यस संक्रमणलाई उल्लेखनीय रूपमा सरल गर्दछ
IOS को लागी गुगल ड्राइव
सबैभन्दा उपयोगी अनुप्रयोगहरू मध्ये एक जुन एप्पलको हस्ताक्षर अनुप्रयोग प्लेटफर्मको माध्यम द्वारा गुगलले नि: शुल्क प्रस्ताव गर्दछ। यो अनुप्रयोगको साथ हामी आवश्यक रहेको सबै सामग्री निर्यात गर्न सक्छौं पुरानो आईफोनबाट यो हाम्रो नयाँ एन्ड्रोइडमा छ। र हामी यो गर्न सक्दछौं केही केहि सरल चरणहरू अनुसरण गरेर।
आईफोनमा स्थापना गरियो, फाईल र कागजातहरू भण्डारण गर्न र प्रशोधन गर्नका लागि यो उपकरणको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुनुका साथै। यो हामी पनि हुन सक्छ आईओएस बाट एन्ड्रोइड मा हाम्रो डाटा स्थानान्तरण को लागी धेरै उपयोगी छ। तसर्थ, हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा यो अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु हो। Y एक पटक स्थापना भयो आईफोनमा, हाम्रो गुगल खाताको साथ आफूलाई यो पहिचान गर्नुहोस्। डाटा यस खाता मार्फत प्रतिलिपि गरिनेछ।
आईफोनमा आईओएसको लागि गुगल ड्राईव स्थापना भएको हामीले निम्न गर्नुपर्दछ। बाट सेटिंग्स मेनू हामीले चयन गर्नु पर्छ "ब्याकअप बनाउनुहोस्"। हामीले गर्नैपर्छ हाम्रो गुगल ड्राइव खातामा डाटा प्रतिलिपि गर्न छनौट गर्नुहोस् जसमा हामीले पहिले पहिचान गर्यौं। एकचोटि यो काम सकिएपछि, हामी विभिन्न फाइलहरू चयन गर्नेछौं जुन हामी प्रतिलिपि गर्न चाहान्छौं जस्तै सम्पर्कहरू, फोटोहरू, क्यालेन्डर घटनाहरू, এমনকি व्हाट्सएप वार्तालापहरू। सजिलो, सही?
जब हामी हाम्रो एन्ड्रोइड उपकरणमा उही अनुप्रयोग खोल्छौं, कारखाना मा पूर्व स्थापित, हामीसँग सबै प्रतिलिपि गरिएको डाटामा पहुँच हुन सक्छ। व्हाट्सएपबाट, जब हामी यसलाई स्थापना गर्दछौं, हामीले गूगल ड्राईवमा प्रतिलिपिबाट भण्डारण सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। हामी सम्पर्कहरू, क्यालेन्डरहरू, आदि पुन: प्राप्ति गर्न समान कार्य गर्दछौं।
आईओएस को लागी गुगल फोटोहरु
गुगल ड्राईवको सीमाको रूपमा हामी फेला पार्न सक्छौं कि यसले हामीलाई प्रदान गर्ने भण्डारण अपर्याप्त छ। सामान्य नियमको रूपमा, स्मार्टफोनको मेमोरी पेशाको उच्चतम प्रतिशत फोटोसँग मेल खान्छ। र यो ती हुन् जसले भण्डारण अव्यवस्थित देखिन्छ।
हामीसँग त्यस्तै छ एप्पल अनुप्रयोग स्टोरमा गुगल ड्राइवबाट, भर्खरै पनि हामी गुगल फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं। एक अविश्वसनीय १ GB जीबी नि: शुल्क उपलब्धका साथ हामी हाम्रो उपकरणहरूको भण्डारण व्यवसायलाई ठूलो मात्रामा कम गर्न सक्छौं। र उही तरिकाले, हाम्रो नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा तत्काल सबै फोटो र भिडियोहरू हाम्रो अधिकारमा छ.
जे होस् सधैं हामी नेटिभ गुगल अनुप्रयोगहरू पहिले सिफारिस गर्छौं यसको समाधान र सिद्ध कार्यक्षमता को लागी। हामी केहि प्रासंगिक अनुप्रयोग सिफारिश गर्न सक्दछौं जुन हामी गुगल प्ले स्टोरमा नि: शुल्क पाउन सक्छौं। यदि तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्न अझसम्म स्पष्टीकरण गर्नुभएको छैन भने, त्यहाँ एक अनुप्रयोग छ जुन सरल र अपरिवर्तनीय छ।
सम्पर्क स्थानान्तरण / ब्याकअप सार्नुहोस्
यदि तपाईंको पुरानो आईफोनबाट तपाईंको नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा सम्पर्क स्थानान्तरण समस्या हो भने, चिन्ता गर्न रोक्नुहोस्। तेसैले तपाईंको एन्ड्रोइडको साथ साथ गलत खुट्टामा सुरू हुँदैन हामीले एउटा अनुप्रयोग चयन गरेका छौं कि यसको प्रयोग पछि तपाईं सिफारिस गर्न हिचकिचाउनु हुन्न। एक मिनेट भन्दा कममा तपाईं देख्नुहुनेछ कि कसरी तपाईंको सम्पर्कहरू एक उपकरणबाट अर्कोमा चीजहरू जटिल बिना नै जान्छ।
चाहे तपाईं आईओएसबाट आयो वा यदि तपाईं एक उपकरण नवीकरण गर्नुहुन्छ र तपाईंको सम्पर्क पुस्तक पुनः प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ यो आदर्श अनुप्रयोग हो। भर्खरको अद्यावधिक गरिएको संस्करण र प्ले स्टोरमा 4,8 रेटिंग यसभन्दा पहिले नै हो। Y यसलाई धेरै पटक प्रयोग गरेको अनुभवले यसको उत्कृष्ट प्रदर्शनको पुष्टि गर्दछ.
हामीले गर्नु पर्छ आईफोन र नयाँ उपकरणमा पनि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। हामी एकै समयमा दुबै फोनहरूमा यसको आइकन मार्फत पहुँच गर्दछौं। हामीले अवश्य पनि खातामा लिनु ब्लुटुथ सक्रिय छ। हाम्रो नयाँ फोनमा हामी विकल्प छनौट गर्नेछौं another अर्को उपकरणबाट सम्पर्कहरू आयात गर्नुहोस् » अनुप्रयोग आफैंले नजिकैको ब्लुटुथ उपकरणहरू ट्र्याक गर्दछ। जब हामी स्क्रिनमा पुरानो उपकरणको नाम देख्छौं, हामीले यसलाई मात्र चयन गर्नुपर्नेछ यसको नामको साथ आइकनमा क्लिक गरेर।
हामी चयन गर्नेछौं, यस मामला मा, आईफोन जुनबाट हामी सम्पर्कहरू आयात गर्न चाहन्छौं। आवश्यक अनुप्रयोग अनुमतिहरू प्रदान गर्नुहोस् आवश्यक ताकि तपाईं क्यालेन्डरमा डाटा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि हामीले यो गर्यौं, फोनबुकले पुरानो उपकरणबाट नयाँमा प्रतिलिपि गर्न सुरू गर्दछ। यो केवल सम्पर्क उपकरणमा आयात गरिएको डाटा भेट्टाउन नयाँ उपकरणमा अनुमति प्रदान गर्न बाँकी छ। Y अहिले नै हामी नयाँ फोनमा हाम्रा सबै सम्पर्कहरूको आनन्द लिन सक्छौं। त्यो सजिलो छ।
अब, हामी अब उपर्युक्तको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनौं किनकि हामी अपरेटिंग सिस्टम परिवर्तन गर्दैनौं किनकि हाम्रो डाटालाई एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा ट्रान्सफर गर्नमा समस्या आएको छ। यी अनुप्रयोगहरूका लागि धन्यबाद हामी हाम्रा सबै फाईलहरू, फोटोहरू र सम्पर्कहरू धेरै सरल चरणहरूको माध्यमबाट गर्न सक्षम हुनेछौं।
तपाईं अब एन्ड्रोइड संसारमा आफूलाई डुबाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ
Hoy हामीले विस्तृत रूपमा गुगल मोबाईल ईकोसिस्टम कसरी प्रविष्ट गर्ने भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गरेका छौं। यस क्षणबाट एन्ड्रोइड पहिले नै तपाईंको जीवनको हिस्सा हुन सक्छ। ठीकसँग कन्फिगर गरिएको, एक स्मार्टफोन आफैको एक उपयोगी "विस्तार" हुन्छ। र हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धमा अवरोध हुनबाट, उचित प्रयोगको साथ, यसले हामीलाई धेरै तरिकामा मद्दत गर्न सक्छ।
यदि तपाईं आईओएस वा एन्ड्रोइड बीच निर्णय गर्न सुरुबाट श from्का गर्नुहुन्छ तपाइँलाई बताउँछ कि समयसँगै, र अधिक र अधिक दुबै अपरेटि operating प्रणालीहरू एक अर्कासँग बढी मिल्दछ। सिद्धान्तमा हामी भन्न सक्दछौं कि ती दुबै समान चीजको सेवा गर्दछन्, र ती दुवै एउटै धारणाको साथ काम गर्छन्। र दुबै अनुप्रयोग स्टोरले समर्थन गर्दछ जुन उनीहरूले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाहरू पूरा गर्दछन्।
त्यो एन्ड्रोइड बाँकीबाट बाहिर खडाको प्रबन्ध गर्दछ केही मुख्य परिस्थितिहरूको कारणले हो। यससँग एक अपरेटि system प्रणाली बढी खुला दिमाग सबै पक्षहरूमा। यसको नि: शुल्क सफ्टवेयर यसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। महँगो लाइसेन्सको आवश्यकता बिना नै अनुप्रयोग विकासमा पहुँच। र धेरै अधिक कन्फिगरेसन र अनुकूलन सम्भावनाको सम्भावना। मानौं, त्यहाँ केहि पनि छैन जुन तपाईं अन्य अपरेटिंग प्रणालीहरूबाट एन्ड्रोइडमा गुमाउन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्न भने, तपाईंले यो गाइड एकदम आधारभूत फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो यसको सृष्टिको सही अन्त हो। ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनुहोस् जो परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा सक्षम छैनन् वा अहिलेसम्म नयाँ मोबाइल प्रविधिहरूमा पहुँच गर्न चाहेका छैनन्। के हाम्रो गाइड तपाईलाई उपयोगी छ? हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाईंको नयाँ स्मार्टफोनलाई सकेसम्म कार्यशील बनाउन सहयोग गर्यौं। सबै बाँकी पूर्ण रूपमा एन्ड्रोइड अनुभवको आनन्द लिनु हो, भाग्य राम्रो हो!
र यदि तपाइँसँग केहि श or्का छ वा केहि छ जुन तपाइँलाई कसरी गर्ने थाहा छैन, हामीलाई एक टिप्पणी दिनुहोस् र हामी तपाईंलाई मद्दत गर्नेछौं.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » एन्ड्रोइड म्यानुअल, शुरुआतीहरूको लागि आधारभूत मार्गनिर्देशन
मितिमा सबैभन्दा पूर्ण म्यानुअलहरू मध्ये! अत्यधिक सिफारिश गरिएको!
धेरै राम्रो लेख। यो प्रायः मानिन्छ कि सबै व्यक्तिहरू केही आधारभूत अवधारणाहरूमा स्पष्ट छन्
Xabin लाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो पोष्ट !! तिनीहरूले यसलाई प्याकमा समावेश गर्नुपर्नेछ जब तपाईं नयाँ फोन खरीद गर्नुहुन्छ सबै कुरा नियन्त्रणमा राख्न।
नागोरेलाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट योगदान। धेरै धेरै धन्यवाद
यो मैले अहिले देखेको सब भन्दा पूर्ण, स्पष्ट, संक्षिप्त र व्यावहारिक छद्म म्यानुअल हो।
यो म्यानुअलको शर्मनाक अनुपस्थिति (एक सानो सानो ब्रोशर द्वारा प्रतिस्थापित) सबै भन्दा नयाँ जेनेरेटेशन सेल फोनमा विपरित छ। यो निषेध र सजाय हुनु पर्छ।
खैर, एन्ड्रोइड टर्मिनलहरूमा म्यानुअलहरूको अभावको उदाहरणको रूपमा:
कसरी मेरो नम्बर UNHIDDEN गर्ने जब म मेरो XIAMI MI A2 र A1 Android 8.1 को साथ कल गर्दछ?
म हताश छु किनकि मैले यसलाई कन्फिगरेसनमा वा NON-IST म्यानुअलमा फेला पार्न सकेन र यो अपरेटरको गल्ती होइन, जसलाई मैले पहिले नै बोलाएको छु।
मलाई सहयोगका लागि अग्रिम धन्यवाद
यी आजका लागि स्मार्टफोनमा अमेजन प्रस्तावहरू छन्
२०१ of को शीर्ष १० फोनहरू